हाम्राे इतिहास काठमाडाैं र बेइजिङको कथनभन्दा धेरै माथि रहेछ : अमिश मुल्मीसँग पुस्तक वार्ता
लेखक स्तम्भकार अमिशराज मुल्मीको पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’ प्रसिद्ध हर्स्ट पब्लिसर्स प्रकाशन गृहबाट आउने भएको छ । अल जजीरा, रोड्स एन्ड किङडम र मिन्ट लौन्ज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पोर्टलमा कलम चलाउँदै आएका अमिश राइटर्स साइड लिटररी एजेन्सीका लागि कन्सल्टिङ सम्पादक पनि हुन् ।
यसै सन्दर्भमा अमिशराजसँग शिलापत्रले गरेको छोटो कुराकानी :
१.यहाँको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’ के विषयवस्तुमा आधारित छ ?
मुलतः सन् १९५० पश्चात् नेपाल–चीनको इतिहाससँग सम्बिन्धत छ, पुस्तक । शीतयुद्धताका नेपालको भू-राजनीतिक सन्तुलन र चीनको नीति तथा कार्यक्रमले कसरी आम नेपालीको जनजीवन प्रभावित पारेको थियो भन्नेबारे केन्द्रित भएको छु । साथै २१ औँ शताब्दीमा चीन कसरी नेपालका लागि प्रमुख द्विपक्षीय साझेदारका रूपमा उदय भयो भन्नेबारे पनि पुस्तकले उजागर गरेको छ ।
२. पुस्तकको शीर्षक 'अल रोड्स लिड नर्थ' ले मुलतः के कुरालाई संकेत गर्न खोजेको हो ? यसको कुनै लाक्षणिक अर्थ छ कि ?
अल रोड्स लिड नर्थले वास्तवमा संकेत गर्न खोजेको पहिलो कुरा हो, नेपाल र नेपालीबीच चीनको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासले दिलाएको आशा, आशाले मूर्त रुप लिगोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ र राजनीतिज्ञहरुले पनि यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
दोस्रो, भारत हाम्रा लागि प्रमुख द्विपक्षीय साझेदार हुँदाहुँदै नेपालले पछिल्लो समय २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गरेपछि भारतको दबाबलाई सन्तुलन मिलाउन उत्तरी चीनतिर निरन्तर संकेत गरिरहेको छ । मेरो पुस्तकको शीर्षकले यिनै कुरालाई संकेत गर्न खोजेको छ ।
३. ‘हिस्टोरिकल नन फिक्सन’विधा नै किन?
‘ह्वाइ’ भन्दा पनि ‘ह्वाइ नट’?
खासगरी सन् १९७० दशकपछिको नेपालको इतिहासबारे तीव्र उत्सुकताले नै मलाई किताब लेखनमा डोर्‍याएको हो । खासगरी नेपाल-चीन सम्बन्धबारे निकै कम लिटरेचर पाइन्छ ।
अर्को कुरा, के नेपालको इतिहास शाह राजाभन्दा माथि हुन सक्दैन ? के आममानिसको आफ्नै इतिहास हुन सक्दैन ? यी प्रश्नहरुले बारम्बार मलाई झक्झकाइरहन्थे । इतिहास जित्नेहरुको घोडा भनिन्छ। इतिहास शासकहरूले नै बनाए तर उनीहरूले बनाएका नीति निर्णयले त सबैभन्दा बढी आममानिसलाई प्रभावित बनाएको थियो । त्यसैले इतिहासलाई आममानिसको दृष्टिकोणबाट किन नलेख्ने ?
त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्नेको इतिहास कस्तो थियो होला ? उनीहरुले सन् १९५० पछि अचानक चीन छिमेकी राष्ट्रका रुपमा उदयमान हुँदा के-के भोगे ? (सन् १९५० सम्म त तिब्वत हाम्रो छिमेकी थियो) मैले यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छु, पुस्तकमा ।
४.पुस्तकले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ ?
मैले अघि पनि भनेँ- पुस्तक विल्कुलै मेरो उत्सुकता र जिज्ञासाको प्रतिफल हो । र, जब मैले घुमे, अनुसन्धान गरे र अन्त्यमा लेखेँ। मैले के महसुस गरे भने इतिहास फगत काठमाडाैं र बेइजिङको कथनभन्दा धेरै माथि रहेछ । उदाहरणका लागि म विश्वास गर्छु कि नेपाल-चीन सम्बन्ध वास्तवमा हिमाली सीमावर्ती भेगमा अन्तर्निहीत हुन्छ । तर, तिनै हिमाली सीमावर्ती भेगका मानिसहरु चीनसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छन् भन्नेबारे निकै कमले चासो दिएको पाइन्छ । उल्टै इतिहासका कथन काठमाडौं केन्द्रित छन् तर काठमाडौंमात्रै नेपाल होइन नि । काठमाडौंले नीति बनाउँछ । तर, के ती नीतिले रसुवा वा मुस्ताङमा रहेका पिँधका मान्छेलाई छुन सक्छ त ? अनि छुन्छ भने तिनीहरुले कसरी सीमावर्ती बासिन्दालाई प्रभाव गर्छ ? मैले यही प्रश्नको खोजी पुस्तकमा गरेको छु ।
५. पहिलो पुस्तक लेख्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?
एकदमै अद्भूत रह्यो, लेखन अनुभव ! तीन वर्षदेखिको निरन्तर प्रयासको प्रतिफल हो, यो पुस्तक । जतिखेर म पुस्तक लेखनका लागि यात्रा गर्दै थिएँ, मेरी पाटर्नर घरको जहाज एक्लैले चलाउँदै थिइन् । यो किताब लेख्दै गर्दा हामीले पेशा र शहर मात्रै होइन, देश पनि परिवर्तन गर्‍यौं । अब छिट्टै पुस्तक बजारमा पनि आउँदैछ, लाग्छ हाम्रो प्रयास सफल भयो ।
६. एक सर्वोत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन गृहबाट किताब मुद्रण हुँदा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
विश्वास नै लागिरहेको छैन । दक्षिण एसियामा यो पुस्तकलाई अमेजनको प्रकाशन छापा माध्यम ‘कन्टेक्स्ट’द्वारा प्रकाशित हुनेछ । वास्तवमा म अजिथा जस्तो सम्पादकसँग जोडिन पाउँदा निकै भाग्यमानी ठानिरहेको छु ।
हस्टसँगको मेरो सहकार्य र पुस्तक मुद्रण हुनुमा मेरा अनन्य मित्र कनिस्का गुप्ताका कारण नै सम्भव भएको हो । उनी दक्षिण एसियाकै एक सर्वोत्कृष्ट लिटररी एजेन्ट हुन् । सन् २०२१ को मध्यतिर नै बेलायत र अमेरिकामा पनि हामीले यस पुस्तकलाई विमोचन गर्ने आशा गरेका छौँ । अबको केही दिनमा नै यसको पनि टुंगो लाग्छ होला ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ३, २०७७, १५:४८:००